Bogotá Region, Bogotá image gallery - Lonely Planet
1 of 5 · Gold sculpture on display at the Museo del Oro. Image by Jane Sweeney / Getty Images
2 of 5 · Gold sculpture on display at the Museo del Oro. Image by Jane Sweeney / Getty Images
3 of 5 · Gold sculpture on display at the Museo del Oro. Image by Jane Sweeney / Getty Images
4 of 5 · Gold sculpture on display at the Museo del Oro. Image by Jane Sweeney / Getty Images
5 of 5 · Gold sculpture on display at the Museo del Oro. Image by Jane Sweeney / Getty Images